Cabudhintii Saaka iyo Ciidankii La Wareegay Maxkamadda Maroodijeex: Caydhintii Iyo Cadaadiskii Aanu Aragnay. | Hayaan News
Cabudhintii Saaka iyo Ciidankii La Wareegay Maxkamadda Maroodijeex: Caydhintii Iyo Cadaadiskii Aanu Aragnay.
Hargeysa(Hayaannews):- Intii aanu iman gaadhiga sida Abwaan Cabdiraxmaan Abees ayaanu gudaha maxkamadda galnay abbaaro 08:40. Laakiin waxa na lagu amray in aanu baxno. Annaga oo dibad-joog ah ayaanu helnay, warar sheegaya in la soo wado… Daqiiqado kaddibna waxa aanu sheedda ka halacsannay baabuur sida Abwaanka oo ay askarina saaran tahay. Waa abbaaro 09:00kii barqannimo.
Judhii gaadhigaasi uu saarnaa Cabdiraxmaan Abees oo katiinadaysani, uu gudaha maxkamadda Maroodijeex ayaanu mar labaad galnay deyrka maxkamadda. Nin Gaashaanle ah ayaa ku kaftamay “Saaka waxa aan maxkamadda ku waday in ay boolisku qabsadaan, waa maxay shacabkan meesha haystaa?”. Daqiiqado gudahood waxa ku yimi Tiyootayaal badan oo askari fuushan tahay. Saaka waxa albaabka maxkamadda ka dhacay inqilaab ay boolisku kula wareegeen maamulka guud ee Irridaha Garsoorka Maroodijeex.
Nin aanu saaxiib nahay oo igu dhaafay jidka ayaa maalin-badhkii igu yidhi “Saaka ma Cabdiraxmaan Seylici ayaa maxkamadda yimi, gaadiid badan oo ciidan ayaa joogay?”. Waxa aan u sheegay in keliya la keenay Abwaan Cabdiraxmaan Abees. Sida loo adkaynayo ilaaladiisa iyo cadaadiska dadka abwaanka u imanaya, waxa aad mooddaa in barada la keenayo dhagar-qabeyaal, dilaa, Alqaacida iyo argaggixiso ama cid halis ku ah amniga.
Waxa ciidankaas madax u ahaa Gaashaanle Cabdi Cawaale (Qushi) oo 2016kii u xil-saarnaa caydhinta dhegaysteyaasha dacwad aan u xidhnaa, mar dambe wuxuu noqday Taliyaha Qaybta Gobolka Saaxil. Dhammaan dadka bannaanka ayaa loo saaray “Baxa, waa la idin soo baadhayaa. Waydun soo noqon”. Jujuub ayaa na lagu kaxeeyay.
Annaga oo sidaas cunaha na loo qabtay ayay dadka qaar si kale u fasiraan cidhiidhiga aanu ku jirno “Magac ayaa loo samaynayaa Cabdiraxmaan Abees”. Ma ciqaab ayaa magac la isugu sameeyaa?. Marka la eego dhanka gudaha maxkamadda, waxa la ii sheegay in uu si rasmi ah u bilaabmay dhegaysiga dacwadda oo uu garnaqeeda hagayo Garsoore Cabdisalaan Sheekh Xasan Axmed oo ka tirsan bahda Maxkamadda Maroodijeex.